एक नम्बरमा कार्टुन्ज क्रु र प्रियंका - Youtube वाच - साप्ताहिक
एक नम्बरमा कार्टुन्ज क्रु र प्रियंका
पछिल्लो समयकी ब्यस्त नायिका प्रियंका कार्की र कार्टुन्ज क्रुका सरोज अधिकारी र आश्मा विश्वकर्माको अभिनय रहेको एक गीत अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङमा परेको छ । ‘माछीले खाने खोलीको लेउ’बोलको गीत नेपालको ट्रेन्डिङको नंबर १ मा परेको हो । दिनेश थपलियाको शब्द, बसन्त सापकोटाको संगीतमा तयार भएको गीतमा सरोज ओली र मेलिना राईले स्वर भरेका छन् । गीत उदयराज पौडेलको एरेन्जमा तयार भएको हो ।
कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोलाई यो समाचार तयार पार्दासम्म ९ लाख ४४ हजार भन्दा धेरै पटक हेरिसकिएको छ । २४ हजार लाईक र १ हजार डिसलाईक रहेको गीतको भिडियोमा १८ सय ७५ ओटा सकारात्मक कमेन्टहरु रहेका छन् ।
शुभ मिडिया होमको प्रस्तुतीमा बनेको गीतको भिडियोलाई सुदीप बरालले खिचेका हुन् । ललितपुरको पाटन दरवार स्वायर र गोकर्ण रिसोर्टमा छायांकन गरिएको गीतको भिडियोलाई अर्जुन जिसीले सम्पादन गरेका हुन् ।
मिटु, विवाह, ब्रेकअप र डेट
प्रियंका चोपडाको यस्तो छ प्रेम कहानी.
अनागत टिजरमा घर ब्यवहारका समस्या
हजार जुनी सम्म शुभमुहुर्त
रानी शाक्यको कथामा मरिष्का पोखरेल माघ २४, २०७६
‘प्रेम गीत ३’को पहिलो गीत 'हात्ती ढुंगामा' सार्वजनिक माघ २१, २०७६
‘चपली हाइट ३’को गीत कस्तो लाग्यो ? माघ २०, २०७६